Natron: yakavhurika sosi yevhidhiyo compositing application | Linux Vakapindwa muropa
Soda yekubikisa iri yemahara yekuumbwa software yakavakirwa pane node, muchinjika-chikuva uye yakavhurwa sosi ine marezinesi eruzhinji (GPLv2), iyi software iyi desktop mumitauro yekuronga C uye Python.
Zvaonekwa kufurirwa nedigital compositing software yakadai seSoftEddie, Avid Media Illusion, Apple Shake, Blackmagic Fusion, Autodesk Moto uye Nuke, iyo kwainowana mushandisi wayo interface uye mazhinji emafungiro ayo.
1 Natron Zvimiro
2 Maitiro ekuisa Natron paLinux?
3 Maitiro ekuisa Natron paLinux kubva kuFlatpak?
Soda yekubikisa inopa yakasimba uye inoshanda maturusi saka vanoita kuti basa ravo riitwe nekukurumidza nemhedzisiro yepamusoro.
Iri svondo ine rutsigiro rwemakumi emafaira emafaira uchishandisa OpenImageIO, inosanganisira multilayer OpenEXR: EXR, DPX, TIFF, PSD, SVG, Raw, JPG, PNG… ndatenda OpenImageIO. uye FFmpeg.
Natron ine intuitive mushandisi interface, saka mushandisi anokurumidza kuitwa nayo.
Kunze kweichi chishandiso ine rutsigiro rwezvivakwa zvemulticore, uko kwese kugadzirisa kuri kuverenga zvakawanda uchishandisa tambo yedziva patambo. Nechiitiko ichi Natron anogona kupa akawanda magirafu panguva imwe chete.
Soda yekubikisa inogona kushandiswa seyera yekuraira chishandiso uye inogona kuve yakabatanidzwa mukupa maneja wepurazi seAfanasy.
Ine mudziyo unonzi NatronRenderer iyo inoshandiswa kuitisa mafaera eprojekti uye Python zvinyorwa. Iyo yekuraira mutsara vhezheni inoitwa kubva ssh pane isiri-kuratidza komputa.
32-bit inoyerera poindi mutsetse dhizaini dhizaini Mafuremu ese anoshandurwa senzvimbo inoyerera RGBA masampula ane premultiplied alpha, ichibvumidza kushandiswa kwea alpha ekugadzira vanoshanda.
Ruvara nzvimbo manejimendi inotarisirwa neyakavhurika sosi yakavhurwa OpenColorIO raibhurari.
Yakazara OpenFX 1.3 API rutsigiro. Kutsigira kwevakawanda
Yemahara uye yakavhurwa sosi OpenFX plugins:
OpenFX-IO: kuverenga chero chinhu kunze kweyakajairwa 8-bit mifananidzo (inosanganisirwa neyekutanga-kunyorwa Natron shanduro).
OpenFX-Misc: seti yematanho ekutanga, seTransform, chroma keyer, nezvimwe ...
OpenFX-Arena: seti yemamwe maodhi (akaisirwa neyekare-yakanyorwa Natron shanduro).
OpenFX-OpenCV - Seti yemapulagi akavakirwa paOverCV.
OpenFX-Yadif deinterlacer: Inoshanda yakavhurika sosi deinterlacer.
OpenFX-Vegas SDK sampuli OpenFX sampuli.
Tsigiro yeOpenFX yekutengesa plugins:
KeyLight neThe Foundry.
Zvimwe zvigadzirwa zveGenart
Maitiro ekuisa Natron paLinux?
Kana iwe uchida kuisa ichi chishandiso pane yako system dIwe unofanirwa kuenda kune webhusaiti yepamutemo yekushandisa, in chinotevera chinongedzo kwaunokwanisa kurodha pasi application.
Munyaya yaDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa zve izvi iwe unofanirwa kuvhura terminal uye uite unotevera kuraira:
Uye iyo iwe unoisa nemaneja wako wekushandisa yakasarudzwa kana nemurairo uyu:
Kana iri Fedora, CentOS, yakavhurikaSUSE kana chero kugoverwa nerutsigiro rpm mapakeji iwe unofanirwa kuita uyu murairo:
Kuisa pane yakavhurikaSUSE kana imwe yeanobva, vhura terminal uye unomhanya:
Nguva Kuti uiise pane Fedora, RedHa, CentOS uye zvigadzirwa zvavo, shandisa unotevera kuraira:
Maitiro ekuisa Natron paLinux kubva kuFlatpak?
Como yazvino nzira yekumisikidza uye kazhinji kune mazhinji aripo ekuparadzira Linux, tinogona kuisa iyi application nerubatsiro rweFlatpak mapakeji.
Isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro musystem yedu kuti tikwanise kuisa mhando iyi yekushandisa.
Kana iwe usina rutsigiro unogona kuiwedzera, pane izvi ini ndinogona kukurudzira kuti iwe ushanyire iyo inotevera posvo izvo zvandinoita pano pablog uye ndichagovana newe maitiro ekuzviita.
Finalmente ingovhura terminal uye unomhanya unotevera kuraira kuti uise iko kunyorera:
Uye wakagadzirira nayo, iwe unenge watoisa kare iyi sisitimu pane yako system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Natron: yakavhurika sosi yevhidhiyo compositing application
Pindura kuti fuck